Nhau - Pfeka chifukidzo chekumeso chekurapa kana nhengo yemhuri yako iri yega, inodaro WHO
Nhengo dzese dzemhuri dzinofanirwa kupfeka chifukidzo chekumeso kana munhu achizviparadzanisa nevamwe kumba uye asingakwanise kugara ega mumba, sekureva kweWorld Health Organisation (WHO).
Sezvineiwo, kana iwe uchida kuzviparadzanisa, iwe unofanirwa kuzviparadzanisa iwe wega mune yako yekurara ine yayo yekugezera, iyo WHO yaMaria Van Kerkhove akadaro panguva yemubvunzo nemhinduro chikamu neChina.
Nekudaro kana iwe usingakwanise kudaro, iwe unofanirwa "kuyedza kuramba uri kure nenhengo dzemhuri yako nepese paunogona napo. Ita shuwa kuti mumba makapfeka mamask, mune ino kesi pfeka zvekurapa masiki, kana iwe uchikwanisa kuwana iwo. Kana zvisiri, pfeka masiki ejira, "Van Kerkhove akadaro.
"Ita shuwa kuti unoita hutsanana nemaoko ako uye unogeza maoko ako nguva dzose, kuti utapukire utachiona pahupamhi, ita shuwa kuti unowana chikafu chakawandisa uye zororo rakawanda uye mvura yakawanda nezvose izvozvo," akawedzera.
Masiki ekumeso ave achishandiswa sechishandiso chakakosha muhondo yepasirese kurwisa denda reCOVID-19, asi havagone kukunda hutachiona vega, vakayambira Michael Michael, weWHO akatora chikamu muchikamu ichi.
Ryan akakurudzira vanhu kuti varambe vachitevedzera matanho ekuregedzera munharaunda, zvisinei nekuti vakapfeka chifukidzo kumeso here kana kuti kwete.
“Zvinokunda zvachose chinangwa [chekupfeka chifukidzo kumeso] kana ukavhara chinhambwe. Uye ndanga ndiine [chiitiko] munguva pfupi yadarika - mumwe munhu akapfeka chifukidzo… akauya kuzondimbundira ndikati, 'kwete'… uye ivo vakati 'asi ini ndakapfeka mask.' Uye ndakafunga, 'hongu, asi zvakadaro zvinoreva kuti hatigone kukumbundira,' sekuda kwandingadai ndaida kumbundira, ”akadaro.
“Saka chifukidzo chinokupa iyo yekuwedzera dura rekudzivirira, asi hazvikupe mvumo ipapo yekubvisa dzimwe nyaya dzese. Kugeza mawoko uye masiki zvakakosha zvakanyanya, "akadaro, achiwedzera kuti vanhu vanowanzo bata kumeso kwavo uye masiki kakawanda kana vakapfeka chifukidzo kumeso, saka vanofanirwa kuyeuka kugeza maoko uye kushandisa sanitizer nguva dzose.